नायिका झरना थापा संग भूपेन्द्र महतले लिएको अन्तरवार्ता ! - Enepalese.com
नायिका झरना थापा संग भूपेन्द्र महतले लिएको अन्तरवार्ता !
इनेप्लिज २०७४ चैत २ गते २३:१७ मा प्रकाशित
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सदावहार नायिकाको छवि बनाएकी नायिका झरना थापा पछिल्लो समयकी सफल निर्मात्री पनि हुन् । १९९६ मा दाइजो फिल्मबाट आफ्नो अभिनययात्राको औपचारिक सुरुवात गरेकी नायिका थापा यति बेला निर्देशकिय खुबीका कारण पनि चर्चामा छिन् ।
उनीद्वारा निर्देशित, ए मेरो हजुर २ ले यति बेला प्रशंसा बटुलिरहेको छ । आफ्नो अभिनय यात्राको २० वर्षपछि निर्देशकका रूपमा ए मेरो हजुर २ लिएर आएकी नायिका झरना थापा अहिले चलचित्र प्रमोसनका लागि अमेरिकामा छन् । उनको अमेरिका यात्रा र लामो समयको अभिनय अनुभव सम्बन्धी अमेरिकाको कोलोराडोबाट सञ्चालित नेपाली अनलाइन पत्रिका बिआरटी नेपाल डटकमका भूपेन्द्र महतले लिएको अन्तरवार्ता..